Fiaraha-miasa : Hanampy amin’ny fiarovana ny vakoka ny Sinoa
Tsy ny resaka ara-barotra ihany. Manana fiaraha-miasa matotra amin’i Madagasikara amin’izao fotoana ny firenena sinoa. Nitsidika ny minisitry ny Kolontsaina sy ny fampiroboroboana ny asa tanana ary ny fiarovana ny vakoka, Jean Jacques Rabenirina, ny …Tohiny
Tsy nampoizina. Voatery nofoanana tampoka noho ny orana nirotsaka tsy an-kijanona entin’ilay andro ratsy Dumazile ireo lalao famaranana roa, eo amin’ny taranja basikety sy beach soccer, amin’ny Tournoi Pangalanes 2018. Fifaninanana eo ambany fiahian’ny Filoham-pirenena …Tohiny
Tsy mora ny fahazoana fiarovana manokana eo anivon’ny zandarimariam-pirenena, ary tsy ny olona na ny fikambanana rehetra manao fangatahana mahakasika izany dia mahazo avokoa. Misy lalàna mifehy azy izy ireny, izay tsy mitovy velively amin’ireo …Tohiny
Hiarahan’ny rehetra mahalala ny mikasika ny lalàm-pifidianana telo izao fa efa ampandinihana azy ny anivon’ny Antenimieram-pirenena amin’izao fotoana izao, ary izy ireo no manana fahefana farany amin’ izany lalàna izany raha toa ka hisy ny …Tohiny